उपत्यका प्रवेशमा कडाइ भने पनि साँगामा छैन झमेला, भित्रिँदै हुलका हुल [भिडियो स्टोरी]
राजधानी काठमाडौंमा कोरोना संक्रमितको संख्या र खतरा बढ्दै गइरहेको बेला सोमवार बिहान उपत्यका छिर्ने पूर्वी नाका साँगाबाट मानिसहरू निर्वाध रूपमा प्रवेश गरिरहेका देखिए ।
रामेछाप, काभ्रेका भित्री गाउँ, सिन्धुपाल्चोक र पूर्वबाट आउने मानिसहरू विना रोकतोक उपत्यका प्रवेश गरिरहेका थिए । सोमवार दिउँसो लोकान्तरको टीमले साँगा नाकामा अवलोकन गरेको हो ।
पूर्वका जिल्लाबाट आउने मानिसहरू बनेपाको धुलिखेलसम्म आउने र त्यहाँबाट जिल्ला भित्रका बस चढेर साँगासम्म आइपुगेपछि काठमाडौं आउने साझा बसमा चढेर निर्वाध रूपमा उपत्यका प्रवेश गरिरहेका छन् ।
कतिपय मानिसहरू साँगाबाट पदैल हिँडेर उपत्यका छिरेको देखिन्छ ।
काभ्रेको नारायणटारबाट साँगासम्म बस चढेर आएका बुद्ध तामाङ त्यहाँबाट साझा बस चढ्दै थिए । काठमाडौंमा ज्यामीको काम गर्ने तामाङ ३ महिनाअघि पैदल हिँडेर घर गएका थिए ।
काठमाडौंमा काम शुरू भएपछि उनी फर्किएका हुन् । एउटा बसबाट साँगासम्म र त्यहाँबाट साझा बसमा जान पाइने भएपछि काठमाडौं आएको उनले बताए ।
सिन्धुपाल्चोकका रामबहादुर राई ३ वटा बस परिवर्तन गरेर साँगा आइपुगेका छन् । साँगाबाट साझा बस लाग्ने र प्रहरीले नरोक्ने थाहा पाएपछि उनी काठमाडौं जान आफ्ना परिवारसहित आएका हुन् ।
उनी बसमा पनि उभिएर आए । बसमा चढ्दा एउटा सिटमा मात्र बस्न पाइला भन्ने लागेको रहेछ उनलाई । तर बसमा भने कोचाकोच गरेर राखिएको उनले बताए ।
बनेपाबाट काठमाडौं दैनिक अफिसको काममा आउने सवारीसाधन जोरबिजोर हेरेर आउन दिएको ड्युटीमा खटिएका प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) किशोरध्वज कार्कीले बताए । ‘माथिको आदेश अनुसार हामीले काठमाडौंमा जागिर गर्न जाने र लामो दूरीबाट आएका पास भएका मानिसहरूलाई मात्र जान दिएका छौं,’ सइ कार्कीले लोकान्तरसँग भने ।
पैदल हिँडेर उपत्यका छिर्न लागेका व्यक्तिलाई साझा बसबाट जान आग्रह गर्ने गरेको सई कार्कीले बताए । तर मानिसहरू पैदल हिँडेर साँगाबाट उपत्यका छिरेको देख्न सकिन्थ्यो ।
धुलिखेलबाट पाँचखाल दोलालघाट जाने ना२ख ७१९३ नम्बरको बसमा यात्रुहरू कोचाकोच थिए । त्यति हुँदा पनि सहचालकले यात्रु बोलाइरहेका थिए । गाडीमा कोचाकोच गरेर यात्रु हालेको ? लोकान्तरको प्रश्नमा ती सहचालकले प्रहरीतर्फ हेर्दै भने, ‘के गर्ने सर यस्तै त हो नि सर खानुपर्‍योे ।’
धुलिखेल बसपार्कमा यात्रु उभिए यात्रा गर्दा समेत प्रहरीले वास्ता गरेको देखिएन । अन्य समयमा पनि उभिएर यात्रा गर्न नपाइने अवस्थामा कोरोनाको समयमा पनि प्रहरीले बेवास्ता गरिरहेका थियो ।
न मास्क, न स्यानिटाइजर !
सरकारले यात्रा गर्दा अनिवार्य स्यानिटाइजर र मास्क प्रयोग गर्न भनेको छ । तर बसमा यात्रा गर्ने कतिपय यात्रुले मास्क समेत प्रयोग नगरेको पाइएको छ । पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै जारी गरेर मास्क प्रयोग नगर्नेलाई कारवाही समेत गर्ने बताएको थियो ।
बसका चालक, सहचालकले पनि मास्क लगाउन जोड दिएको देखिएन । चालकले पनि देखाउनका लागि मात्र मास्क लगाएका थिए । लोकान्तरले क्यामेरा तेर्स्याएपछि ना२ख ७१९३ नम्बरको बस चालकले हतारहतारमा गोजीबाट मास्क झिकेर लगाएका थिए ।
साझाले यात्रुलाई उपत्यका भित्र्याउँदै
साझा बसलाई साँगाबाट उपत्यका छिर्न कुनै रोक छैन । स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्णय गरेर साझा बसलाई बनेपाबाट काठमाडौं आउन दिने भनिएको थियो, दैनिक रोजगारीमा आउने यात्रुलाई बोकेर मात्रै । तर साझा बसले यात्रुलाई लाइन लगाएर काठमाडौं ल्याइरहेको छ ।
साझा बसमा चढेकालाई कहाँबाट आएको हो, कहाँ जाने, पास छ छैन भनेर प्रहरीले सोध्ने गरेको छैन । तर आफ्नै सवारीसाधनमा आउने व्यक्तिलाई भने अनिवार्य पास मागिँदैछ । पूर्वको जुनसुकै ठाउँबाट बनेपा आएको भएता पनि साझा बसमा चढेपछि सिधै काठमाडौं आउन पाइन्छ ।